Nguva yekuverenga: 6 maminitsi(Last Updated On: 28/08/2020)
rwendo urwu anoona yakakura swath kweItaly, sezvo zvinoda iwe kubva kuMilan yose nzira muromo munyika vene. Munzira maunowana matsvairo eparutivi rwemahombekombe uye nezvikomo zveTuscany. Ichi chi, ehe saizvozvo, kuwedzera kune yakavezwa mifananidzo yeRome nenhoroondo yayo.
Even nani, kamwe kwawakaita nzira yako kuna Hamburg uri chinhambwe kubva Berlin. Guta razvino reGerman rinozivikanwa nekuda kwaro husiku husiku uye vazvipire kwazvo kune tsika yeva hipster. Nakidzwa nemigwagwa yemigwagwa uye huru kofi paunofungisisa zvakasarudzika zvasara zveBerlin Wall.
Izvi hwokutiparadza yakakurumbira anomhanya katanhatu pavhiki. Also akadana Caledonian akarara, ichi akarara basa mixes umbozha pamwe mutengo kugona. Unogona kuwana zveefa kuti zvinosanganisira zvokudya, zvinwiwa, uye chokwadi, makamuri ekurara.
Nepo musingadi kuwana kuzara akarara berths pamusoro nechitima ichi, iwe uchawana nguva yehusiku nzira inowanikwa zuva nezuva. Izvi kuchaita kuti musiye usiku uye svika mangwanani ndivandudzwe zuva inouya. Nokuti zvakanaka chiitiko asiri akarara chitima, unoda kuchengeta matikiti ekutanga. matikiti izvi kazhinji kuuya vakawedzera perks akadai mamwe mukwende, zvaisanganisira chikafu, uye yakawanda yakavanzika cabin ruzivo.
Kana uchifamba uchifamba Europe nechitima wakasvibiswa chose sarudzo. Kana zviri muScotland kana Spain, Noweyi, kana Sweden, akarara nezvitima zvimwe zvakanaka mabasa kumativi kusvika mangwana vakazorodza uye vakagadzirira zuva kwako kuuya. Paunenge uine plethora zvaungasarudza yauinayo, sechitima chechitima kana kurara kwehusiku kweitima refu, Porendi, Lisbon kana kunyange Moscow, kuita pachako nyasha uye rova ​​izvi matanhatu pamusoro akarara nezvitima mu Europe pachinzvimbo. hauzovipo urombo!